Thursday November 18, 2021 - 06:52:37
ilaha caafimaadka wadanka Suudaan ayaa sheegay in tobanaan ruux ay dhinteen halka kuwa kale ay dhaaacyo soo gaareen kadib markii ay toogasho geysteen ciidamada ammaanka.
Wararka ka imaanaya Suudaan ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof shacab ah ladilay kadib markii ay ciidamada meleteriga iyo kuwa booliska ay rasaas ku fureen shacab iskusoo baxyo ka dhigayay magaalooyinka Khurduum iyo Umu Durmaan.
Kalkaaliyaasha Isbitaallada Suudan waxay sheegeen in ay qaabileen boqolaal ruux oo isugu jiro kuwa dhaawacyo ah iyo kuwa ay waxyeello kasoo gaartay sunta dadka ka illimaysiisa oo ay isticmaalayeen ciidamada ammaanka.
Saraakiisha mucaaradka ayaa ku eedeeyay taliska melleteriga ee uu hoggaamiyo Jeneraal Cabdi Fataax Al Burhaan in uu awood xad dhaaf ah u adeegsanayo kala eryidda shacabka jamaahiirta ah ee diiddan Inqilaabka lagu riday xukuumaddii uu madaxda ka ahaa Cabdalla Xamduuk.
Waxa loogu yeero beesha caalamka oo ay ugu horreeyaan wadamada reergalbeedka ayaa markale ku celiyay diidmadooda ku aaddan shaqa ka eryidda xukuumaddii madaniga aheyd.
Ku dhawaad 10 ruux oo ku dhintay dibad baxyo ka dhacay wadanka Suudaan.